Ahoana no fiasan'ny fitaizana zaza any Aostralia? – ALinks
Ny fitaizana ny zaza dia zavatra ilain'ny ray aman-dreny malaza sy tena ilaina. Ohatra amin'izany ny Long Day, ny toeram-piasana, ary ny fikarakarana ankizy aorian'ny fianarana. Ny fianakavianao dia afaka misafidy ny hikarakara ny zaza araka izay azo atao.
Tsiahivina fa niova ny politikan’ny fitaizana zaza ao amin’ny fanjakana tamin’ny taona 2018. Ny tombontsoa voatanisa eto dia natambatra ho karama tokana fantatra amin’ny anarana hoe Subsidy misahana ny zaza. Mampihoron-koditra ny tonga any amin'ny firenena iray ary tsy mahafantatra na iza na iza, mainka fa izay azo itokisana amin'ny zanakao.
Saika samy mila miasa ny ray aman-dreny mba hivelomana na hivelomana. Azo inoana fa mila mitady safidy fitaizana zaza mety ho an'ny fianakavianao ianao. Azonao atao ny mahita fa mahafinaritra ny fanampian'ny governemanta amin'ny fitaizana zaza. Avy any UK mankany Aostralia ianao.
Any UK, tsy omen'ny governemanta ny fanohanana ny fitaizana zaza raha tsy efa feno telo taona ny zanakao. Ampitahao amin'i Aostralia, izay ahafahan'ny tsirairay mahazo tambin-karama hatramin'ny $7500 isaky ny zaza isan-taona. Saingy misy ihany koa ny tombontsoa azo avy amin'ny fikarakarana ankizy.
Ireto misy safidy sasany amin'ny fikarakarana zaza azonao atao any Aostralia.
Fikarakarana zaza ao an-trano
Raha misy namana, havana, na mpitaiza mikarakara ny zaza, dia manondro ny fikarakarana ao an-trano izany. Safidy hafa momba ny fikarakarana ankizy dia tsy misy rehefa ilainao izany.
Ny fianakaviana dia mety miantehitra amin'ny fikarakarana ao an-trano miaraka amin'ny raibe sy renibe na havana tsy tapaka. Ny fianakaviana hafa dia mametraka fandaharana ara-dalàna kokoa, toy ny fandraisana mpitaiza na mpitaiza zaza.
Azonao atao ny manakarama mpitaiza iray ho an'ny fikarakarana maharitra kokoa sy maharitra. Ny mpitaiza dia za-draharaha sy mahay kokoa noho ny mpitaiza zaza.
Ny fikarakarana tsindraindray, ny préscolaire ary ny akanin-jaza dia ohatra amin'ny fikarakarana ivon-toerana. Fianakaviana maro izay miasa tsy tapaka isan'andro no maniry ny fikarakarana andro lava ao amin'ny toeram-pikarakarana ankizy.
Ny ivon-toeram-pikarakarana ankizy dia manome fikarakarana fohy izay mila olona hikarakara ilay zaza. Afaka misoratra anarana amin'ny andro fikarakarana tsindraindray ianao ary mahazo ny fanampiana. Raha miasa amin'ny ora tsy ara-dalàna na tsy ampoizina ianao, dia safidy tsara izany.
Ny ankizy 3-5 taona dia mandeha any amin'ny préscolaire ivelan'ny foibe mitokana. Ny préscolaire sasany koa dia manome fikarakarana indraindray raha tsy eo ny ankizy hafa.
Fikarakarana ny fianakaviana
Rehefa mandeha any amin'ny mpanabe ankatoavina ao an-tranon'ilay mpanabe ny zanakao, dia manondro ny fitaizana zaza tsy ampy taona izany. Betsaka ny tombony azo amin'ny fampiasana ny fitaizana andro aman'alina.
Ny fikarakarana androm-pianakaviana dia mety tsy azo ianteherana kokoa noho ny fikarakarana any amin'ny foibe. Ohatra, raha marary ny mpikarakara anao, dia mety mila fitsaboana solon-tena ianao.
Fanaraha-maso aorian'ny sekoly
Ny fikarakarana ivelan'ny ora fianarana dia fitaizana zaza mila mialoha sy aorian'ny fianarana amin'ny andro tsy misy mpianatra na fialan-tsasatra. Ho an’ny ankizy any amin’ny ambaratonga fototra ihany io.
Ny mpanabe zaza tsy ampy taona dia tsy maintsy mahafeno fepetra amin'ny fitaizana zaza tsy ampy taona na fitaizana zaza tsy ampy taona. Mety ho mpampianatra na mpanabe mahay izy ireo vokatr’izany. Manana traikefa izy ireo hanampy ny zanakao hianatra, singa tena ilaina amin'ny traikefa momba ny fikarakarana zaza.
Ny orinasa sasany, toy ny toeram-panatanjahantena na toeram-pivarotana, dia manome fikarakarana zaza tsy ara-potoana any amin'ny toeram-pitsangatsanganana. Ireo orinasa ireo dia mety handoa sara na hampiditra iray ho ampahany amin'ny vidin'ny maha-mpikambana azy na ny vidin'ny serivisy.
Izy ireo dia fomba mahafinaritra ho an'ny ankizy hifanerasera amin'ny hafa rehefa miala voly. Izy ireo koa dia afaka manampy ny ankizy hiomana amin'ny fikarakarana zaza ho avy.
Ireo creches ireo dia tsy mila manaraka ny fenitra mitovy amin'ny fikarakarana ivon-toerana. Vokatr'izany dia tsy hanampy ilay zaza amin'ny fianarana izay ataon'ny foibe fanabeazana ny ankizy manara-penitra izy ireo.
Ankoatra ireo dia maro ireo toeram-pikarakarana ankizy. Afaka misafidy izay mety ho an'ny zanakao ianao. Miankina amin’ny fotoana sy taona ary zavatra ilaina hafa izany. Afaka misafidy araka izay azo atao ianao.
Maimaimpoana ve ny fitaizana zaza any Aostralia?
ny tsirairay dia manan-jo hahazo tamberim-bidy hatramin'ny $7500 isaky ny zaza isan-taona. Saingy misy ihany koa ny tombontsoa azo avy amin'ny fikarakarana ankizy. Ny governemanta Aostraliana dia manana fomba fiasa amin'ny tobim-pitaizana zaza sy fikarakarana azo idirana amin'ny ray aman-dreny.
Ohatrinona ny vidin'ny mpiasan'ny fitaizana zaza any Aostralia,?
Any Aostralia, mahazo $63,000 isan-taona na $32.31 isan'ora ny mpiasan'ny fitaizana zaza salantsalany. Manomboka amin'ny $52,540 isan-taona ny karama fanombohana ho an'ny sehatry ny fidirana. Ny matihanina karama ambony indrindra dia mahazo hatramin'ny $96,041 isan-taona.
Lafo ve ny fitaizana zaza any Aostralia?
Tsy afaka mividy fitaizana zaza tsy ampy taona ny Aostraliana satria ny antsasaky ny fianakaviana no mandany vola bebe kokoa amin'ny fikarakarana zaza. Ankoatra izany, mihoatra ny 80% no mandany vola bebe kokoa amin'ny fitaizana zaza noho ny faktioran-jiro.
Nahoana no lafo be ny fikarakarana zaza any Aostralia?
"Olana lehibe ho an'ny tokantrano sahirana ny vidiny," hoy izy nanamarika. “Avo kokoa ny fanampiana ho an’ny tokantrano iva, saingy mihena izany rehefa mihena ny vola miditra aminao. Haingana ny tahan'ny tapering. Vokatry ny tahan'ny taper subsubvention dia tsara ny tsy famporisihana hiasa.
Inona no fandraisan’ny fanjakana anjara amin’ny fitaizana zaza?
Ny governemanta dia hifanaraka amin'ny 25% amin'ny 'fandoavana mendrika' rehetra ataon'ny mpitaky ny TFC mandritra ny fe-potoana hahazoana zo. Ny fanjakana dia handoa 20p isaky ny 80p apetraky ny mpitaky ao amin'ny kaontiny fitaizana ny zanany. Saingy hatramin'ny vola iray ihany.
Any Aostralia, iza no mendrika hikarakara zaza maimaim-poana?
Raha mifanaraka amin'ny fepetra rehetra ianao na ny namanao dia mety ho mendrika ianao. Azonao atao ny mikarakara ny zanakao farafahakeliny roa alina isaky ny roa herinandro, na manana fikarakarana 14 isan-jato farafahakeliny ianao.
Izy ireo no tompon'andraikitra amin'ny saram-pikarakarana omena any amin'ny toeram-pikarakarana ankizy manana fahazoan-dàlana. Manaraka ny fepetra takian'ny trano izy ireo.
Inona no fandoavam-bola isaky ny zaza an'ny Centrelink?
Halefanay any aminao izany rehefa vita ny fampihavanana ny fandoavanao raha mahafeno fepetra ianao. Izany dia atao amin'ny faran'ny taom-piasana.
Mandoa hatramin'ny $781.10 isaky ny zaza mahafeno fepetra ho an'ny taom-piasana 2020-21 izany. Ho an'ny taom-piasana 2021-22, ny ankizy mahafeno fepetra tsirairay dia handoa hatramin'ny $788.40.
Maimaimpoana ve ny sekoly any Aostralia?
Ho an'ny olom-pirenena Aostraliana sy ny mponina maharitra dia maimaim-poana ny sekolim-panjakana. Ny sekoly sasany dia maka “fandraisan’anjara an-tsitrapo” na saram-panomezana, miovaova na aiza na aiza manomboka amin’ny AU $60 ka hatramin’ny AU $1,000. Na dia tsy asain'ny lalàna handoa ny saram-panomezana aza ny olona iray, dia mampirisika ny olona hanao izany ny sekoly.
Mamandrika ny toerana
Tsara ny misoratra anarana amin'ny serivisy tianao na dia mbola manapa-kevitra aza. Tsy maninona ny mametraka ny zanakao amin'ny lisitra fiandrasana maro satria ny serivisy iray dia mety tsy afaka manome ny andro rehetra ilainao.
Fiarovana ny zaza any Aostralia
Ny manampahefana miaro ny zaza dia mety hiditra an-tsehatra amin'ny toerana misy ny fianakaviana noho ny loza mety hitranga amin'ny zaza iray.
Any Aostralia, ny fanjakana sy ny faritany dia tompon'andraikitra amin'ny fampandehanana ny serivisy fiarovana ny zaza.
Ny lalàna momba ny fiarovana ny zaza any amin'ny fanjakana sy faritany aostralianina.
Fitsarana: Territry Aostralia renivohitra
Fihetsiketsehana lehibe: Ny lalàna momba ny ankizy sy ny tanora 2008 (Asa)
Asa / lalàna mifandraika amin'izany: Lalàna momba ny fananganana 1993 (Asa), Ankizy sy tanora (Act Childcare Services)
fahefana: Renirano atsimo vaovao
Fihetsiketsehana lehibe: Ny lalàna momba ny ankizy sy ny tanora (fikarakarana sy fiarovana) 1998 (NSW)
Asa / lalàna mifandraika amin'izany: Lalàna momba ny fananganana 2000 (NSW), Lalàna ho an'ny ankizy sy tanora 2014 (NSW), Fitsipika momba ny fiarovana ny ankizy (fepetra iraisam-pirenena) 2006 (NSW)
Fitsarana: Northern Territory
Fihetsiketsehana lehibe: Fitsaboana sy fiarovana ny ankizy 2007 (NT)
Asa / lalàna mifandraika amin'izany: Ny lalànan'ny kaomisera ho an'ny ankizy 2013 (NT), Lalànan'ny serivisy misahana ny fahasembanana 2004
Ny fiarovana ny zaza dia ampiharina amin'ny lalàna fanjakana sy faritany sasany, ao anatin'izany:
Lalàna momba ny zon'olombelona 2004 (ASA);
Ny satan'ny lalàna mifehy ny zon'olombelona sy ny andraikitra 2006 (Vic.).
Ny lalàna momba ny zon'olombelona momba ny zon'olombelona 2005 (Asa);
Lalàna momba ny zon'olombelona 2004 (NSW);
Na izany aza, ny lalàna manerana ny fanjakana sy ny faritany rehetra dia manana fitsipika mitarika amin'ny lafiny lehibe maromaro. Ireto fitsipika ireto dia misy:
fidirana an-tsehatra mialoha; ary
ny fandraisan'anjaran'ny ankizy sy ny tanora amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra.
- Rindrambaom-pirenena hiarovana ny ankizy aostralianina 2009–2020
- Fanaraha-maso mialoha ny asa: Fiaraha-miasa amin'ny fizahana ankizy sy fisavana polisy
Ity loharanom-pahalalana ity dia natao ho an'ny mpampiasa, mpiasa ankehitriny sy ho avy ary mpilatsaka an-tsitrapo manao asa mifandraika amin'ny ankizy any Aostralia.
- Fanaovana tatitra tsy maintsy atao momba ny fanararaotana zaza tsy ampy taona sy fanaovana tsirambina
Ny fanaovana tatitra tsy maintsy atao dia teny iray ilazana ny fepetra takian'ny lalàna ho an'ny vondron'olona voafantina hitatitra ireo tranga ahiahiana ho fanararaotana zaza tsy ampy taona sy fanaovana tsirambina ny mpitondra fanjakana.
- Fiarovana ny zaza Aostralia 2017–18 (pdf) mifandraika amin'ny sehatry ny fahasalamana
Museum !! Fomba iray hahafantarana ny tantaranao, indreto ny tranombakoka tsara indrindra any Aostralia